Tito Vilanova: Lionel Messi Dhaawac Ma Uusan Aheyn Xalayto. | Laacib.net
Posted by: Balaleti 02-May-2013	46 Comments
Tababare Tito Vilanova ayaa shaaca ka qaaday inuusan dhaawac aheyn sababtii ka danbeysay inuu Messi ciyaarin kulankii xalay ee Barcelona ay guuldarrada xun ka soo gaartay Bayern Munich.
Xiddiga reer Argentina ayaa si lama filaan ah loogu soo bilaabay xalayto kursiga keydka halkaasoo uu ku dhameystay ciyaarta isagoo kursiga keydka ka soo daawanayay kooxdiisa oo 3-0 lagu xaaqay lugtii labaad ee semi-finalka.
“Messi ma uusan dhaawacneyn, laakiin ma uusan hagaagsaneyn, waxaana ku fekeray inuusan xaaladaas ku caawin karin kooxda” ayuu Vilanova u sheegay suxufiyiinta.
“Waxa uu ciyaaray kulankii Bilbao sababtoo ah xaalad ka fiican xaaladii xalay ayuu ku jiray, laakiin dhamaadkii ciyaartaas waxa uu dareemay waxyaabo qariib ah.
“Halis waan gelin laheyn Leo dhamaadkii ciyaarta hadii aan fursad u heysan laheyn inaan soo gaareyno finalka.”